Mogadishu Journal » Mareykanka oo sheegay in ay dileen 100 dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab
Mjournal :-Ku dhawaad 100 dagaalame, oo Al Shabaab ayaa lagu dilay tiro kalena, dhaawac ayaa soo gaaray sida uu Sheegtay Mareykanka, kadib duqeyn ka dhacday Koonfurta Somaliland, 24-kii saac ee lasoo dhaafay.
War kasoo baxay, Howlgalka Mareykanka ee Qaarada Afrika, ee AFRICOM, ayaa waxaa daboolka looga in duqeyn ka dhacday Gobolada Baay iyo Shabeelaha Hoose, Khamiistii iyo Jimcihii lagu beegsaday xubnahaan la dilay.
Waa kaloo, bayaanka AFRICOM, lagu shaaciyay in xubnaha la bartilmaameed saday ay ku guda jireen xiligii ay dhaceystay Duqeynta, wax lagu sheegay shir ama kulan, islamarkaana ay goobta joogeen saraakiil sar sare.
Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ee Xukuumada Soomaaliya, Mudane Eng Yariisow, oo warfidiyeenada kula hadlayay caasimada dalka ee Muqdisho, waxa uu hoosta ka xariiqay in Howlgal ka dhacay Juba Dhexe lagu dilay 18 dagaalame
Mr Yariisow, ayaa wuxuu tilmaamay in Howgalkaan ay fuliyeen, sida uu hadalka u yiri Ciidanka Xooga Soomaaliyeed, islamarkaana lagu beegsaday xarunta ugu weyn Al Shabaab ay ku diyaariso Qaraxyda, oo Degamada Jilib ku taala.
Balse, Afayeenka dhinaca Howlgalada Al Shabaab, Cabdi Fataax Abuu Muscab, oo la hadlay Idaacada ku hadashada afka Al Shabaab ee Andulus, ayaa wuxuu beeniyay warka Yariisow, asigoona ku sheegay mid aan sal iyo baar lahayn.